Citrine နှင့်အတူဖက်ရှင်ပုတီး - ရွှေ, ငွေ, ခေထြား, ရှည်လျား, စတုဂံ, စတုရန်း, pusety
Citrine နှင့်အတူပုတီး - သဘာဝအ citrine နှင့်အတူလှပသောပုတီး၏ 70 ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံကို
citrine ဓါတ်ရောင်ခြည်နွေးထွေးမှုနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေနှင့်အတူမည်သည့်လက်ဝတ်ရတနာ။ ခေတ်သစ်မိန်းကလေးငယ်များနေဆဲကျောက်မျက်န်းကျင်ကိုပဲအရာ, အယူသီးမှုနှင့်ဒဏ္ဍာရီထဲမှာယုံကြည်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလယ်ခေတ်အတွင်းပိတ်သောကျောက်၏ပိုင်ရှင်သည်ပညာကိုတွေ့နှင့်ဘေးဥပဒ်ထဲကနေမိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်သည်ဟုယုံကြည်ကြ၏။
သဘာဝအ citrine နှင့်အတူပုတီး
တောင်မှရှေးခတျေ, citrine သည်အနာပျောက်စေသောဂုဏ်သတ္တိများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မိမိအအကူအညီနဲ့အားရစရာအစာအိမ်နှင့်အတူ အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသောကျောက်လက်ဝတ်ရတနာအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, သူ့ကိုနေကြတယ်စေ။ တစ်ဦးကအလွန်ရေပန်းစားကျောက်မျက်မိဖုရားများနှင့်တရားရုံး၏မင်းသမီးတို့လက်ထက်၌ဖြစ်ခဲ့သည်။ Citrine - Semi-အဖိုးတန်ကျောက်အမျိုးအစားကနေဥဿဖရားတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, ။ သူကတာရှည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်ရှိခြင်း, မရွှေဥဿဖရားသို့မဟုတ်စပိနျအဖြစ်လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဝါရောင်လက်တင်သံပုရာဆိုလိုတာက Citrus လို့ခေါ်တဲ့ XVIII ရာစုကျောက်အလယ်၌။ အရိပ်ကျောက်မျက်ကယ့်ကိုပျားရည်ဖို့ဇင့်ကနေ dazzle ။ အစပိုင်းမှာ, အ citrine ဖောက်လုပ်နိုငျသညျ, လက်ရှိ Jewel နည်းပညာသစ်များ၏အကူအညီဖြင့်အထူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်လက်ဝတ်ရတနာပါစေ။ ထုတ်ကုန်များအမျိုးမျိုးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျောက်ခဲတို့ကိုဖြတ်နည်းလမ်းများပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်လာကြပြီ
ရွှေနေရောင်ခြည်ဖြာ, ဇိမ်ခံ image ကိုဖန်တီး citrine နှင့်အတူပုတီးချထားတဲ့။ အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များသဘာဝမတူညီကျောက်မျက်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအတိအကျတူညီအလှဆင်ဖန်တီးရင်တောင်သူတို့နေဆဲကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သဘာဝအ citrine ငွေပုတီးတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့လမ်းဖန်တီးပါ။ ကြောင့်, ငွေကျောက်မျက်၏အေးမြသောအရိပ်မှအားလုံး၎င်း၏နေရောင်ခြည်လွှဲပြောင်း။
ဆရာဝန်များယနေ့ဓာတ်သတ္တုသည်ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်တစ်ဦးအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်နှင့်အတူကူညီပေးသည်ကြောင်း underscore အိပ်မပျော် , မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Citrine စွမ်းအင်စစ်သွေးကြွဘက်မှာကြိုးစားရန်နိုင်, ဒါကြောင့်ကျောက်ကိုဆက်ဆံရေးကို, မြှင့်တင်ရေးနှင့်အားနည်းချက်အသက်ဝိညာဉ်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်သဟဇာတများအတွက်အသုံးပြုသည်။ citrine မိန်းမနှင့်ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူလှပစတိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကြာပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာဖို့အခွင့်အလမ်းမသာ။ ဒါဟာကျောက်မျက်သူ့ဟာသူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မှတဆင့်သယ်ဆောင်ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။
ရွှေ Citrine ပုတီး
citrine ကောက်ရိုးအရောင်များနှင့်အတူအဝါရောင်ကိုရွှေချမ်းသာကြော့တစ်အလှဆင်အောင်, ဿုံတစ်ဦးချင်းစီကတခြား complementing တစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောပေါင်းစပ်ဖန်တီးပါ။ citrine နှင့်အတူမကြာခဏကိုရွှေထုတ်ကုန်များတွင်မာစတာဒေါသနှင့် coquetry ၏ပုံရိပ်ကိုပေးခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်သည်အခြားကျောက်များနှင့်အတူထည့်သွင်းပါစေ။ Jewel အဆိုပါစိန်ပွင့်ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်အလှဆင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိခိုက်မယ့်ကုဗ zirconia, ကိုအသုံးပြုပါ။ citrine နှင့်အတူရွှေပုတီးမဆိုမော်ဒယ်အတွက်လိုက်ဖက်စွာကြည့်ရှု:
ငွေရောင် Citrine ပုတီး
ငွေအသူ့ဟာသူအေးမြသောအရိပ်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်, ငွေနှင့်အတူပေါင်းစပ်နေသာ Citrine, ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ရှုပါ။ ဘယ်အချိန်မှာထိုကဲ့သို့သောသဟဇာတသောကျောက်အာရုံကိုတစ်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်နှင့်မည်သည့်မိန်းကလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောလက်ဝတ်ရတနာစျေးကြီးသည်မဟုတ်, ကရောင်စုံလှပါတယ်။ ပိတ်သောကျောက်၏အရောင်နဲ့အရွယ်အစားထုတ်ကုန်မော်ဒယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ citrine နှင့်အတူအသုံးအများဆုံး, ငွေပုတီး - ကွန်ဂိုနှင့်ဖြစ်ပါသည် လေးညှင်းပွင့ ။
citrine ဆွဲထား, စွဲစေယုံကြည်စိတ်ချရကျောက်ခဲနှင့်စစ်ဆေးတစ်ခုဆက်စပ်ပစ္စည်း purchasing အသုံးပြုပုံကျောက်မျက်ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေဖြစ်ဖို့တိုင်းတာ, ချွတ်ယွင်းမှုအတွက်စစ်ဆေးခြင်း။ လူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးအဘို့အညီအလွန်သေးငယ်သောကျောက်ခဲနှင့်ရင့်ကျက်အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့်အဆင်တန်ဆာကြီးတွေ citrine နှင့်အတူပုတီး။ အတူတူကုန်ထုတ်လုပ်မှုရတနာများအတွက်အသုံးပြုသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်သတ္တု Jewel နဲ့အခြားကျောက်များနှင့်အတူ:
citrine နှင့်အတူပုတီးနေသမျှကာလပတ်လုံးထိုကျောက်အရောင်စားဆင်ယင်တစ်ဦးထိတွေ့နှင့်အတူ Blend သည်အတိုင်း, အညိုရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ဝတ်စုံနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ စပျစ်သီးကိုစတိုင်နှင့်အလှဆင်နှငျ့အညီအမှုအရာ။ citrine မထိုက်မတန်နှင့်အတူဆက်စပ်ပစ္စည်းများ:
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လုပ်ဒီကျောက်မျက်နှင့်အတူပုတီး။ သောလူမြိုး၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖန်တီးရတနာအတွက်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားရေးဦးစားပေးကထပ်ပြောသည်။ အမှုအရာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားပေမယ့်အစဉ်အလာနှင့်အတူဆက်စပ်စရိုက်များမှာအားလုံးရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ Jewel ထုတ်ကုန်အတွက်အလှအပနှင့်ဘောင်အဆင်တန်ဆာအတွက်အသုံးပြုမဆိုသတ္တုရန်ပြီးပြည့်စုံသောအပွငျအဘို့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုင်တွယ်၎င်း၏လွယ်ကူခြင်း၏ဤကျောက်မျက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကြိုက်တယ်။ ဤကျောက်သည်မကြာခဏမိမိတို့၏တူအရိပ်ကြောင့်ဥဿဖရားနှင့်အတူရောထွေးနေသည်။ Citrine ပိုပြီးသိပ်သည်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အလင်းလျော့နည်းရှိပါတယ်။
ကြီးမားသော citrines နှင့်အတူပုတီး
မဆိုထိုမိနျးမကြီးမားသောကျောက်များနှင့်အတူပုတီးကိုအလှဆင်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့၏အကူအညီဖြင့်ထိုအမျိုးသမီးလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူတို့ရဲ့အနေအထားနှင့်အဆင့်အတန်းကိုအလေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြောင့်ကြီးမားသော citrines နှင့်အတူကျောက်မျက်လက်ဝတ်ရတနာ၏ပြင်းထန်မှုမှတိုတောင်းစေခြင်းနှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်သောအင်္ဂလိပ်ချိတ်, အတူ။ ဇိမ်ခံကြီးမားတောက်ပတဲ့လိမ္မော်ရောင် citrine ရွှေပုတီးကြည့်ရှုပါ။ လက်ဝတ်ရတနာအတွက်ကြီးမားသောကျောက်များနေ့စဉ်အသက်အဘို့နှင့်ညနေပိုင်းခါးပန်းကိုသင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်များအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်ဘူး။
citrine နှင့်အတူ Long ကပုတီး
လူကြိုက်များတာရှည်ဆွဲပြားပုတီး။ သူတို့ရဲ့အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျအမြင်အာရုံရှည်နိုင်ပါတယ် သင်၏မျက်နှာကိုပုံသဏ္ဍာန် ။ ပုံရဲ့လွယ်ကူသပ်သပ်ရပ်ရပ်ကွင်းဆက်အပေါ် citrine နှင့်အတူရွှေဖြူအတွက်ပုတီးကိုငါပေးမည်။ ပိုများသောအကြီးအကျယ်မျိုးကွဲလက်ဝတ်ရတနာပိုမိုဘုံဖြစ်ကြသည်။ အရှည်န့ပေါ်ချိတ်လွယ်ကူပေါ်တွင်တင်နဲ့ off ယူစေမယ့်ကွင်းဆက်စေသည်။ အဆင်မပြေထုတ်ကုန်ဆုံးရှုံးရန်လွယ်ကူကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
citrine pusety နှင့်အတူပုတီး
များစွာသောမိန်းကလေးပုတီး၏အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစား - တစ်ဦးဇော်မွှားပန်း။ သူတို့ကကျောက်ခဲနှင့်အများဆုံးတတ်နိုင်လက်ဝတ်ရတနာဖြစ်ကြသည်။ citrine pusety နှင့်အတူရွှေငွေပုတီးဒီကျောက်မျက်နှင့်အတူပုတီး၏အခြားအမျိုးအစားများထက်အများကြီးစျေးသက်သာရှိပါတယ်။ သူတို့ကနေ့စဉ်ဘဝနှင့်ပွဲလမ်းသဘင်ပါတီမှအညီအမျှသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။ နေ့ချင်းညချင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ထိုကဲ့သို့သောချွန်ထက်သည့်ချောင်း၏ကြီးစွန်းနှင့်၎င်းတို့၏နှစ်လိုဖွယ်အတွက်လျော့နည်းအလှဆင်။ pusetah အပေါ်စွဲစေသုံးမျိုး၏နေသောခေါင်းစဉ်:
citrine နှင့် chrysolite နှင့်အတူပုတီး
ဂရိကနေ Peridot - ရွှေကြောကျခဲပေမယ့်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်၏တကယ်တော့သူ့ရဲ့အဓိကအရိပ်။ olivine, သံလွင်အရောင်နဲ့တူ - သဘာဝသေံသူ့ကိုအခြားအမည်အားပေးတော်မူ၏။ chrysolite နှင့်အတူအဝါရောင်နှင့်အစိမ်းလျတ်လှပသော citrine ပုတီးကြောင့်နှင့်ကြော့ရှင်း၏အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေးနှင့်အလုပ်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်။ အညိုရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်မျက်စိနှင့်အမျိုးသမီးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်သောကျောက်များ၏ဤပေါင်းစပ်။
citrine နှင့်အတူ Square ကိုပုတီး
ကျေးဇူးတော်လည်ပင်းနှင့်ပခုံးခိုင်မြဲမီးမောင်းထိုးပြအရပ်ရှည်ရှည်နဲ့သွယ်လျမင်းသမီးများအတွက်သင့်လျော်သောစတုရန်းကျောက်ခဲနှင့်ပုတီး။ အဆိုပါအလှဆင်အပေါ်အချိုးကျကျောက်မျက်နေ့စဉ်အသက်အဘို့သင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်။ ရင်ပြင်နှင့်မျက်နှာ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်အတူ citrine မထိုက်မတန်မိန်းကလေးများနှင့်အတူစတုဂံကြီးတွေပုတီး:
နီလာခရမ်းရောင်နှင့် citrine နှင့်အတူပုတီး
နီလာခရမ်းရောင် - ကြောကျ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ခရမ်းရောင်-နီသို့မဟုတ်အပြာ-ပန်းရောင်အရောင်ရှိပြီးဖြစ်သောလင်းကျောက်အမျိုးမျိုး။ ဒီထူးခြားတဲ့ကျောက်မျက်ရတနာလမ်းလျှောက်ဒဏ္ဍာရီများ၏လုံ့လရှိသူဂုဏ်သတ္တိများတွင်။ ကျောက်ခေတ် Semi-အဖိုးတန်ကျောက်မျက်များ၏အမျိုးအစားပိုင်နှင့်အတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့, ဒါပေမယ့်စျေးကြီးသတ္တုနှင့်အတူလက်ဝတ်ရတနာအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှု:
ဘယ်အချိန်မှာအပူ, သဘာဝနီလာခရမ်းရောင်အရောင်ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်အခြား Semi-ကျောက်မြတ်အတွက်ပြန်သွားလေ၏။ prasiolite အခါအပူ - - သံပုရာအဝါရောင် Citrine အစိမ်းရောင်ကျောက်မျက် calcining ခြင်းဖြင့်ရရှိသောရလဒ်။ Ametrine ရရှိသောနီလာခရမ်းရောင်နှင့် citrine ဓာတ်သတ္တု၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏ပေါင်းစပ်အတူ။ နီလာခရမ်းရောင်နှင့် citrine နှင့်အတူပုတီး, အထူးသဖြင့်ရင့်ကျက်စတိုင်ဖက်ရှင်အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးသင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ ပန်းပွင့်ကြယ်နဲ့အကိုင်းအခက်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်အတွက် INSERT ကျောက်ခဲနှင့်ရွှေစင်လက်ဝတ်ရတနာကြည့်ရှုသည်။ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာပုံရိပ်သို့မဟုတ်နွေရာသီမတ်မတ်မှကိုက်ညီနီလာခရမ်းရောင်နှင့် citrine နှင့်အတူ Silver, ပုတီး။
စိန်ရတနာ Jewel ဖန်တီးရန် citrine, ပယင်း, ပျားရည်-အရောင်ကိုသုံးပါ။ မိန်းကလေးများစွာသေးငယ်တဲ့ကြိုက်တတ်တဲ့ pusety နှင့်စတိုင်ကာစရာကုလားကာမျက်ရည်စက်လေးတွေ။ တစ်ရေတံခွန်၏ပုံစံကိုဖန်ဆင်းကြီးမားသောကျောက်များတောက်ပလိမ္မော်ရောင် citrine စိန်နှင့်အတူထုတ်ကုန်ရရှိမှုလူကြိုက်များ။ ကျောက်မျက်၏ဤပေါင်းစပ် playfully ယင်း၏ပိုင်ရှင်၏မျက်နှာကို refresh ။ citrine နှင့်စိန်လက်စွပ်နှင့်အတူရွှေပုတီးတစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလှပါတယ်။
ကွင်းပေါ် Citrine တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ကျော်ဒါမှမဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်။ Form ကိုအလှဆင်ကွဲပြားခြားနားသောအထူနဲ့အချင်း၏နိုင်ပါတယ်။ စတိုင်သေးငယ်တဲ့ကျောက်မျက်နှင့်အတူ gilded သေးငယ်တဲ့ citrine ပုတီးကြည့်ရှုပါ။ အဆိုပါအလွတ်သဘောစတိုင်ဖို့သင့်လျော်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ကြီးမားသောမော်ဒယ်။ လူကြိုက်များ ပုတီးကွင်း ကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်ကျောက်ခဲနှင့်။ အသွင်ပြောင်းပုံသဏ္ဍာန်အလှဆင်ပတ်ပတ်လည်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင် Shimmering ။
ဦးထုပ်အမျိုးအစားများ - အရှိဆုံးဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်တစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်ယခုရာသီ
Chanel နေကာမျက်မှန် - trendsetters ကနေကာမျက်မှန်ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ဂျော်နီ Depp ၏သမီး
ရော်ဘာဖိနပ် Helly Hansen
အမှိုက်အိတ် 120 ဌ
စသည်တို့ fertilization အတွက်ဘယ်လောက်ပါလဲ?
တစ်ဦး phobia ဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့ - အမှောင်ကိုကြောက်ရွံ့?
Vanessa Paradis အသစ်တစ်ခုကိုရည်းစားနဲ့ရက်စွဲကိုသွား
ခေတ်မှီအကျီ - Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016